Kuwe uphahla lwendlu kwisiphepho | News24
Kuwe uphahla lwendlu kwisiphepho
Isithombe:SithunyelweUNksz Jabu Bhengu wakaZayeka eSweetwaters phambi kwendlu yalomndeni ewelwe uphahla ngesiphepho sangoMgqibelo.
UMNDENI wakwaBhengu endaweni yakaZayeka eSweetwaters uphoqeleke ukuthi uqoqelane egumbini elilodwa ngemuva kokuthi uphahla lwendlu yalomndeni luwe kwisiphepho sangoMgqibelo mhlaziyi 16 kuSepthemba.
Umoya obuvunguza ngamandla obuhambisana nemvula udale umonakalo ezingxenyeni eziningi zesifundazwe saKwaZulu-Natal ngoMgqibelo, kwezinye izindawo kudilike izakhiwo, kwawa uphahla, kwasiphuka nezihlahla.
“Sizwe ngomsindo omkhulu kanti besekuphephuka uthayela wendlu, uphephukele emagcekeni akwamakhelwane,” kusho oyilungu lalomndeni uNksz Nobuhle Bhengu.
Uthe uphahla luwe emagumbini amabili kwamane endlu yalomndeni okubaphoqe ukuthi ebusuku ngenkathi sesidlulile isiphepho befake uthayela owesikhashana kwelinye lamagumbi awelwe uphahla ukuze bezokwazi ukulisebenzisela ukulala.
Uthe: “Besibeke amatshe okubamba uthayela, uthayela waleli elinye igumbi wona ulimale kakhulu ayikho into ebesingayenza ngawo,” kusho uNksz Bhengu.
Uthe ngenhlanhla alikho ilungu lomndeni elilimalile ngenkathi kuwa uphahla ngoMgqibelo ntambama.
Uthe: “Enye into elimalile umabonakude sesibonga khona nje ukuthi ayikho enye impahla emoshakele ngesikhathi sesiphepho,” kusho uNksz Bhengu.
Uthe ngesikhathi kuwa uphahla bekukhona amalungu omndeni ayisithupha kwayishumi nanye kanti kulabo abayisithupha kubalwa nezingane ezintathu ezimbili ezineminyaka emibili kanye neyodwa eneminyaka eyisikhombisa.
Uqhube wathi yize indlu yalomndeni inamagumbi amane kodwa basebenzisa amathathu kuphela ngoba elesine linenkinga yokuthi liyavuza uma kunetha imvula.
Uthe: “Besicela uma singathola abangasisiza ukuthi siyakhe kabusha indlu yasekhaya ngoba iyazibhedela,” kusho uNksz Bhengu.
Uthe lomndeni usulinde kusukela ngonyaka ka-2015 ukuthi ukhandelwe indlu yomxhaso kahulumeni kodwa kuze kube yimanje akukaze kwakhiwe lutho.
Uthe: “Ngonyaka odlule sasitshelwe ukuthi indlu sizokhandelwa ngo-Agasti ngawo wona lowo nyaka kodwa asitholanga lutho. Saphinde sabuyela ngoMashi kuqala lonyaka ukuyothola ukuthi ngabe kwenzakalani ngendlu satshelwa ukuthi izokwakhiwa ngoJulayi kodwa namanje akaze kube khona lutho olwakhiwe,” kusho uNksz Bhengu.
Mayelana nohlelo lokwakhiwa kwezindlu endaweni yakaZayeka eSweetwaters, okhulumela umasipala waseMsunduzi, uNksz Thobeka Mafumbatha uthe uhlelo lokwakhiwa kwezindlu kulendawo luyaqhubeka kanti akukho ukubambezeleka okukhona.